लकडाउनकाे मार : कुखुरा भोकै म’र्न थाले, १०० रुपैयाँमै चार कुखुरा ! – Khabarhouse
लकडाउनकाे मार : कुखुरा भोकै म’र्न थाले, १०० रुपैयाँमै चार कुखुरा !
Khabar house | २२ चैत्र २०७६, शनिबार ०७:०३ | Comments
सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर । को;रोना रोकथामका लागि सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन लगाएसँगै खोरमा हालेका कुखुरा भोकै म’र्न थालेका छन् । यससँगै कञ्चनपुरका कुखुरा व्यवसायीलाई भने कराडौँको घाटा लागेको छ । चीनको वुहान बाट फैलिएको कोरोना भाइरस (को;डिभ १९) को संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै समेत पछाडि धकेलिदिएको छ ।
को;रोना रोकथामका लागि सरकारले नेपाललाई लकडाउन गरेको छ । लकडाउन कारण बजार बन्द भएपछि यहाँका आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् । कञ्चनपुरका कुखुरा उत्पादक किसान समेत मारमा परेको बताइरहेका छन् । यति सम्म कि १ सय रुपैयाँमा ४ कुखुरा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्, कुखुरा व्यवसायी । यो सम्भवतः बोइलर कुखुरा पालन ईतिहासमै किसानले पहिलो पटक यस्तो दुर्दशा भोग्नु परेको हो ।
को;रोनाका कारण दाना बन्ने उद्योगमा कच्चा पदार्थ नभएको र उत्पादन भएको कुखुरा पनि खोरमै २ देखि ४ किलोसम्मका भएपछि सस्तोमै बेच्न थालिएको हो । दानाविना भोकै मर्ने भएपछि २५ रुपैयाँ प्रतिकिलाको दरले ज्यूँदा कुखुरा बेच्न थालेका छन् कञ्चनपुरका व्यवसायीले । अहिले यहाँका १ हजारभन्दा बढी कुखुरा व्यवसायीलाई ६० करोडभन्दा बढी घाटा खेप्नुपरेको कुखुरा व्यवसायी भरत दत्त भट्टले बताउनु भएको छ ।
भएको पैसा कुखुराको चल्ला र दाना किन्दैमा सकिएको उनले बताए । कुखुराको आहारा दाना नपाए पछि कुखुरा खोरमै म’र्नुभन्दा त सस्तोमै बिक्री गरेर अलिअलि रकम जाेहाे गर्नु ठीक रहेकाे अर्का व्यवसायी मीनराज भट्टले बताए । चारो सकिएछि घरमा रहेको अन्न बालीले केही दिन कुखुरा पालेको तर त्याे पनि नपुग्ने भएपछि आफूहरुले रू १०० मा ४ कुखुरा बेचेको व्यवसायी भट्टले बताए ।
अहिले बजारमा तरकारी भन्दा बोइलर कुखुराको मासु सस्तो भएको छ । आलुको मुल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ भए पनि बोईलर कुखुराको मुल्य प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ भएको छ । मासुभन्दा आलुको मुल्य दोब्बर भएपछि स्थानीयहरू कुखुरा किन्न आएको एक ग्राहक रमेश पालले बताए । कञ्चनपुरमा स्थानीय प्रशासनले राति ८ बजेपछि दाना ढुवानी गर्न दिने भने पनि व्यवसायीहरूले केही फराकिलो समय राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।